DF oo Ciidamo u daabuleysa Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo Ciidamo u daabuleysa Dhuusamareeb
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Ciidamo u daabuleysa Xarunta dowlad Goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb, xilli ay soo dhawdahay Doorashadii madaxtinimada.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan Gor-Gor ayaa maanta laga dejiyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Ciidamada ayaa lagu sheegay in ay horudhac u ahaayeen wafdiga Ra’iisul wasaare Rooble oo halkaas kulamo kula qaadanaya maamulka Galmudug, hayeeshee warakaasi waa been abuur, oo macluumaad ay Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya in ciidamadani ay horay u tageen Dhuusamareeb xilligii la boobayay doorashadii Qoor Qoor. Haddana waxaa soo dhaw doorashadii Xildhibaanada iyo tii madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo in ay dhacdo horraanta sanadka cusub.
Wafdi ballalaaran ee uu hoggaaminayo Ra'iisulwasaare Rooble ayaa gaaray Dhuusamareeb iyagoo ka yimid magaalada Garoowe oo ay kula kulmeen madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Puntland. Ciidamada Gor Gor ayaa ku soo aaday saacado ka hor inta uuusan imaan wafdiga Ra'iisulwasaaraha.
Dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo waxay caan ku tahay Ciidamo u daabulidda dowlad goboleedyada kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland kuwaasoo ay dowladdu ku dooneyso in ay ku baahiso awoodeeda ciidan.